Landa i-PWDT Zlin Z-142 FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 32.1 MB
Play 13 063
Umbhali: Ithimba Lokwakha Amaphiko wePannon
Umkhiqizo omuhle kakhulu wekhwalithi onikezwa yi Pannon Wings Design Team, imodeli yendabuko ye FSX futhi P3D v4 +. Kubandakanya i-cockpit enemininingwane ebonakalayo, imisindo evela ku-Zlin yangempela, imodeli yendiza inembile kakhulu ihlolwe abashayeli bangempela nabaqeqeshi. Futhi, kufaka amageyimu wokwenza ngokwezifiso ne-3D. Imodeli yangaphandle iqukethe ama-polygons angama-85,129. Le pakethe iqukethe izikimu ezi-9 zokupenda.
I Zlin Z 42 eyodwa-engine esihlalweni ezimbili-trainer Czechoslovakian izindiza akhiwe Moravan Otrokovice. A version asethuthukile, Z 142, ithandwa kakhulu izindiza okufana izindiza line yomenzi.